फोहरको ग्याँस पाइपलाइन मार्फत घर–घरमा !
घोराहीमा फोहरबाट ग्याँस उत्पादन गर्न सुरु गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका १६ करौतीडाँडामा फोहरबाट ग्याँस उत्पादन गर्न सुरु भएको हो । करिब ३ महिना अघिदेखि फोहरबाट ग्याँस उत्पादनको परिक्षण...
घोराहीमा फोहरबाट ग्याँस उत्पादन गर्न सुरु गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका १६ करौतीडाँडामा फोहरबाट ग्याँस उत्पादन गर्न सुरु भएको हो । करिब ३ महिना अघिदेखि फोहरबाट ग्याँस उत्पादनको परिक्षण सुरु गरिएको नेपाल उर्जा विकास कम्पनी प्रालिले जनाएको छ ।
अहिले परिक्षणको क्रममा दैनिक ३ सय घनमिटर ग्याँस उत्पादन भैरहेको नेपाल उर्जा विकास कम्पनी प्रालिका प्लान्ट म्यानेजर हरिशरण श्रेष्ठले जानकारी दिए । “अहिले फोहरसमेत कम राखिएको छ...
नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा कैलालीका सञ्जयकुमार चौधरी निर्वाचित भएका छन् । चितवनको सौराहामा सम्पन्न महासंघको छैटौं अधिवेशनबाट चौधरी भारी मतका साथ विजयी भएका हुन्...
नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा कैलालीका सञ्जयकुमार चौधरी निर्वाचित भएका छन् । चितवनको सौराहामा सम्पन्न महासंघको छैटौं अधिवेशनबाट चौधरी भारी मतका साथ विजयी भएका हुन् । चौधरी धनगढीस्थित चौधरी बुक डिपोका सञ्चालक हुन् भने पूजा कापी उद्योगका अध्यक्ष हुन् ।
अध्यक्ष पदका लागि चौधरीसहित तीनजनाको उम्मेदवारी थियो । अध्यक्ष पदका उम्मेदवार चौधरीले नवराज ढकाल लाई हराउँदै निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्षका लागि मातृ...
२०५३ सालमा भैरहवामा स्वागत बुक एण्ड जनरल स्टोरको नामबाट पुस्तक व्यवसाय शुरु गरेका मनहरी बस्यालले करिब १० वर्षसम्म कपिलबस्तुको तौलिहवामा पुस्तक व्यवसाय सञ्चालन गरे । २०६५ सालदेख...
२०५३ सालमा भैरहवामा स्वागत बुक एण्ड जनरल स्टोरको नामबाट पुस्तक व्यवसाय शुरु गरेका मनहरी बस्यालले करिब १० वर्षसम्म कपिलबस्तुको तौलिहवामा पुस्तक व्यवसाय सञ्चालन गरे । २०६५ सालदेखि भने उनी बुटवलमा पुस्तक तथा स्टेशनरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । बस्याल कपिलबस्तु शाखाको सचिव हुँदै २ कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य, पश्चिमाञ्चल उपाध्यक्ष, केन्द्रीय महासंघको सल्लाहकार, उपमहासचिव हुँदै पाँचौ अधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । यो अवधिमा कतिपय पालिकाले नामूना कामका विभिन्न योजना अगाडि सारे । कतिपय नमूना भनिएका योजना बीचमै अलपत्र छन् भने कतिपय सुरु नै गरिएको...
बाणगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुपोषणको अवस्...
नेकपा (एमाले)को १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन शुक्रबारदेखि चितवनमा सुरु हुँदैछ । महाधिवेशन नजिकिएसँगै यतिबेला चितवनको नारायणी नदी किनार क्षेत्र र सौराहा क्षेत्रमा चहलपहल बढेको छ ।
एमालेका केन्द्रीय तहका नेतादेखि जनवर्गीय सङ्गठनका नेता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधीहरु चितवन आउने क्रम शुरु भएको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि सौराहामा शनिबारदेखि मात्रै बस्ने व्यवस्थापन मिलाइएको छ । महाधिवेशनको...
म्यान्मारमा सैन्य अदालतद्वारा अमेरिकी पत्रकारलाई ११ वर्ष जेल
म्यान्मारमा एउटा सैन्य अदालतले अमेरिकी पत्रकार ड्यानी फेन्स्टरलाई ११ वर्ष जेल सजाय दिने निर्णय सुनाएको छ।
मोहरको दान, करोडको आषिस !
‘बाल्यकालको देउसीभैलो मलाई खुबै सम्झना आउँछ । देउसीभैलो खेल्दा एक मोहर पैसा पाउँथ्यौं । सँगै हुन्थ्यो विभिन्न थरीका रोटी, चामल, सुपोमा धान अनि बलेको दियो । यस्तो कार्तिकक...
‘बाल्यकालको देउसीभैलो मलाई खुबै सम्झना आउँछ । देउसीभैलो खेल्दा एक मोहर पैसा पाउँथ्यौं । सँगै हुन्थ्यो विभिन्न थरीका रोटी, चामल, सुपोमा धान अनि बलेको दियो । यस्तो कार्तिकको दान पाउँदा हाम्रो खुशीले घरको धुरी काट्थ्यो । हामीले लक्ष्मीले बास गरुन, सुख शान्ति होस् भनेर आषिस दिन्थ्यौं । यसरी चार दिनसम्म भैलो खेल्दा १० रुपियाँजति जम्मा हुन्थ्यो’
बाढीपहिरोले ८८ को मृत्यु ३० जना बेपत्ता
बाढीपहिरो र डुबानबाट बिहीबारसम्ममा मुलुकका विभिन्न जिल्लामा ८८ जनाको मृत्यु भएको ििववरण संकलन भएको छ । अधिकांशको पहिरोका कारण ज्यान गएको गृह मन्त्रालयल...
बाढीपहिरो र डुबानबाट बिहीबारसम्ममा मुलुकका विभिन्न जिल्लामा ८८ जनाको मृत्यु भएको ििववरण संकलन भएको छ ।
अधिकांशको पहिरोका कारण ज्यान गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहीबार मात्रै ११ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । यसअघि बुधबार ६३ र मङ्गलबार १४ को मृत्यु पुष्टि भएको थियो । विपद्मा परेर पाँचथरमा मात्रै सबैभन्दा बढी २७ जनाको मृत्यु भएको छ । इलाम र डोटीमा १३/१३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यस्तै कालीकोट, ब...
बेलहिया नाकामा देखियो दशैं
बेलहिया सीमा नाकाबाट विशेषगरी दशैं मनाउने नेपालीहरु प्रवेश गरिरहेका छन् । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङ्जा, कास्कीलगायत पहाडी जिल्लाका युवाहरु धेरै रहेको बेलहिया प्रहरीले ज...
बेलहिया सीमा नाकाबाट विशेषगरी दशैं मनाउने नेपालीहरु प्रवेश गरिरहेका छन् । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङ्जा, कास्कीलगायत पहाडी जिल्लाका युवाहरु धेरै रहेको बेलहिया प्रहरीले जनाएको छ । नेपालीहरु धेरै ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्किन थालेपछि स्वास्थ्य जाँचमा पनि समस्या पर्ने गरेको छ ।
तीन दिनदेखि सीमानाका खुलेपछि रुपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै दैनिक झण्डै चारसय नेपा...
गुनी माननीयलाई ‘मन्त्री उपहार’
लुम्बिनी प्रदेशमा गुनी माननीयलाई ‘मन्त्री उपहार’ दिने प्रथा शुरु भएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने, सरकार गिराउने र बचाउनेक्रम शुरुभएसँगै सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्...
लुम्बिनी प्रदेशमा गुनी माननीयलाई ‘मन्त्री उपहार’ दिने प्रथा शुरु भएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने, सरकार गिराउने र बचाउनेक्रम शुरुभएसँगै सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीले त्यसरी मन्त्री चयनको शुरुवाद गरेका हुन् । यस खालको अभ्यासले सक्षम, इमान्दार र राजनैतिक रुपमा खारिएका माननीय मन्त्री बन्ने अवसरबाट बन्चित भएका छन् भने पाटी भित्रै पनि यसको गुनासो बढेर गएको छ ।
त्यसरी मुख्यमन्त्रीलाई गुन लगाएवापत मन्त...